म ‘राजकुमार’ होइन, सभापतिको स्वभाविक दाबेदार हुँ: प्रकाशमान सिंह :: Setopati
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन, भावी नेतृत्व र समसामयिक राजनीतिबारे कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहसँग सेतोपाटीका प्रशन्न पोखरेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
कुरा तपाईंको स्वास्थ्यबाट सुरू गरौं। छरितो देखिनुहुन्छ, २२ किलो तौल कसरी घटाउनुभयो?
म मधुमेह, प्रेसरको बिरामी हुँ। केही समयअगाडि दुई पटक अस्पताल भर्ना हुनुपर्‍यो। अस्पतालबाट फर्केपछि पार्टीकै साथीहरूले शरीरको तौल घटाउन सुझाव दिए।
यसपछि मैले बालाजुका एक जना चिकित्सकलाई भेटें। उहाँले दैनिक १६ घन्टा भोको बस्न सुझाव दिनुभयो। म फास्टिङ गर्न थालें। तीन महिनामा २२ केजी घटेछु।
तपाईंको शरीर त छरितो भयो, नेपाली कांग्रेस पार्टीको स्वास्थ्य बिग्रँदैछ। कसरी सुधार गर्ने?
सक्रिय रूपमा राजनीतिमा लाग्न स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनुपर्छ। म अब सबै साथीहरूलाई पार्टीको गहन जिम्मेवारी लिन मैले स्वास्थ्य सुधार गरिसकेँ भन्छु।
अब १४ औं महाधिवेशन आउँदैछ। पार्टीको स्वास्थ्य सुधार गर्ने अवसरका रूपमा सबैले महाधिवेशनलाई लिनुपर्छ।
कांग्रेसको सिद्धान्त बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्था राम्रो छ। इतिहास पनि राम्रो छ। तर काम भने भनेजस्तो गर्न सकेन।
संविधान बनाउनेजस्ता काम कम्युनिष्टले गर्न सकेनन् कांग्रेसले गरेर देखायो। तर संविधान कार्यान्वयन गरी संस्थागत गर्ने बेला जनताले कांग्रेसलाई म्यान्डेट दिएनन्। त्यसले पार्टीभित्र केही कमजोरी रहेछ भन्ने देखियो।
पार्टी सभापतिमा जनताको विश्वास भएन भने राम्रो नहुने रहेछ। राम्रो काम गर्ने भए नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जनताको भनाइ छ।
त्यसकारण पार्टीलाई बुझेको, निष्ठावान्, तलदेखि दु:ख गर्दै आएको, सिद्धान्त बुझेकोजस्ता सबै कुरा भएकोलाई महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुर्‍याउनु पर्छ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेकै हो। पटक-पटक प्रधानमन्त्री पनि भएको, चौथो प्रयासमा सभापति पनि भएको हो तर उहाँले पार्टी राम्रोसँग चलाउन सक्नुभएन।
हरेक चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने हो। एक वर्ष थपियो। जुन विधानबाट उहाँ पार्टी सभापति हुनुभयो त्यही विधानअनुसार निर्देशित गरेका काम उहाँले गर्न सक्नुभएन।
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक असोज १९ मा बस्दैछ। सभापतिले महाधिवेशन फागुनबाट पछाडि सारौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो भने यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ?
फागुन ७ देखि १० सम्मै महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी राख्छौं। कुन जिल्लामा के समस्या छन्, कहाँ विधानविपरीत काम भइरहेका छन् भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ।
पार्टीको विधि विधानअनुसार पो क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण गर्नुपर्छ। विधान उल्लंघन गरेर वितरण गरेको क्रियाशीलले वैधता पाउँदैन।
कांग्रेसमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी मूल्य मान्यता र आदर्शको राजनीति छाडेर सत्ताको राजनीतिमा केन्द्रीत हुनु हो।
अर्को कमजोरी कांग्रेस संस्थागत नै हुन सकेन। प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। विधान छ तर कामकारबाही विधिसम्मत तवरले सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन।
१३ औं महाधिवेशनमा तपाईं सभापति उठ्छु भन्नुहुन्थ्यो। पछि हट्नुभयो। यस पटक के गर्नुहुन्छ?
१३ औं महाधिवेशनमा उठ्ने भनेको थिएँ। अन्तिमसम्म पनि उठ्ने तयारी नै थियो।
सबै साथीहरूले रामचन्द्र पौडेल र शेरबहादुर देउवा समकालीन हो। तपाईंहरूको उमेर छ, अर्को पटक हुनुहोला। यस पटक पौडेललाई सहयोग गरौं भनेकोले मैले सहयोग गरेको हो।
रामचन्द्र दाइले पनि त्यसबेला यस पटक मलाई सहयोग गर्नु अर्को पटक तिमीहरूकै पालो आउँछ भनेको हो।
यसपटक १३ औं महाधिवेशनजस्तो हुँदैन। सबैले मलाई सभापतिमा तपाईं स्वभाविक उम्मेदवार हो भनेका छन्। कार्यकर्ताले पनि पार्टीको हालत यस्तो छ तपाईंहरूले नेतृत्व नगरे पार्टी कता जाला-जाला भनेका छन्।
कांग्रेस कमजोर हुँदा कम्युनिष्टको बोलवाला बढेको छ। सरकारले संविधानको भावनाविपरीत काम गर्दैछ।
प्रजातान्त्रिक प्रणाली जोगाउन पनि कांग्रेसलाई बलियो बनाउनु पर्नेछ। ठिक नेतृत्वको हातमा नगई यो पार्टी जोगिँदैन। १४ औं महाधिवेशनमा सभापति र पदाधिकारीहरू राम्रा मानिस ल्याएर पार्टीलाई संस्थागत गरी चुनौतीलाई सशक्त तवरले सम्बोधन गर्नुपर्छ।
यहाँको कुरा सुन्दा पार्टीको नेतृत्व मैले गर्न सक्छु भन्ने खालको देखियो। महाधिवेशन जित्न टिम पनि चाहिएला नि?
अधिवेशनका लागि राम्रो टिम चाहिन्छ। विभिन्न चरणमा यसबारे बैठक भइरहेका छन्। यो सजिलो काम होइन। धेरैको इच्छा छ, मिलाउनु पर्नेछ। समय आएपछि ठिक मानिस ठिक ठाउँमा राखेर प्रभावकारी टिम हामी प्रस्तुत गर्छौं। यसको गृहकार्य भइरहेको छ।
वरिष्ठ नेता पौडेललाई पनि मनाउनुहुन्छ?
साथीभाइहरू बसेर सल्लाह गर्छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधि आउँलान् उनीहरूको विचार लिइन्छ। टिम राम्रो बनाउन महाधिवेशन प्रतिनिधिको पनि विचार सुन्नुपर्छ।
कतिपयले १४ औं महाधिवेशनमा नयाँ गुट जन्मिन्छ, पुरानो गुट यथावत् रहँदैन भनेका छन्। योसँगै कांग्रेसमा तीन ‘राजकुमार’को चर्चा हुने गरेको छ। तपाईं, विमलेन्द्र निधि र शशांक कोइराला मिल्न सक्नुहुन्छ?
को राजकुमार थाहा छैन। म त राजकुमार हुँदै होइन। म त तलैदेखि लड्दै भिड्दै आएको मानिस हुँ। राजकुमार त केही नगरी राजाका छोरा राजकुमार हुने हो। राजतन्त्र नै हटाइसकेको छ भनेपछि पार्टीमा युवराजको कन्सेप्ट कसले ल्यायो? म त मेरो कामअनुसार राजनीतिमा टिकिरहेको छु।
कुन राजकुमारलाई इंगित गरेको थाहा भएन। म त पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। पार्टीका सबै कार्यकर्तासरह सबै संघर्षमा भाग लिएको छु। मैले गर्न पर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको छुजस्तो लाग्छ।
मैले निधि, कोइराला र सिंहको कुरा किन उठाएको भने कांग्रेसमा गुट झांगिएको छ। गुट अन्त्य गर्न योगदान दिन सक्नुहुन्छ?
गुट झांगिने कुरा सभापतिमा भर पर्छ। त्यही भएर म नम्बर वान म्यान हुन चाहिरहेको छु।
मैले देखेको छु कि- ए कांग्रेस, बी कांग्रेस र सी कांग्रेसले गर्दा नेपाली कांग्रेस कता पुग्यो, पुग्यो।
नेपाली कांग्रेसलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर आगामी दिन अगाडि बढाउनु पर्छ। सभापति ठिक मानिस आयो भने काम राम्रो हुने रहेछ। टिम राम्रो तर सभापति राम्रो भएन भने पनि काम नहुने रहेछ।
पार्टीलाई सही अर्थमा संस्थागत गरियो भने तेरो-मेरो हुँदैन। पार्टी विधान, नियमअनुसार बैठक हुन्छ। अहिले त कागजमा मात्रै काम सीमित छ। टिकट वितरणमा जे मन लाग्यो त्यो गरिदिएको छ। अनि जनताले कहाँबाट भोट दिन्छ?
यहाँ पार्टीको जिल्ला सभापतिदेखि केन्द्रीय उपसभापतिसम्म हुनुभयो। अब उठ्ने भनेको सभापतिमै होला नि!
दाबेदार के? सबैले भन्छन् नेचुरल रूपमै सभापतिको उम्मेद्वार भइसकेँ। म डबल, त्रिपल प्रमोसन मागिरहेको होइन। सबै पुगिसकेको छ। सभापति उम्मेदवार त स्वभाविक भइसक्यो। टिम राम्रो गर्नका लागि सबै बसेर कुरा गरौं भनिरहेको छु। एक्लै त गर्न सकिने होइन।
युवालाई कांग्रेसको नेतृत्वमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने बहस छ। चर्चामा रहेका विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापाहरूलाई समेटेर लैजाने छलफल केही गर्नुभएको छ?
यो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। गुटले गर्दा राम्रो काम गरेकाहरू पनि अवसर पाइरहेको छैन। निष्पक्ष रूपमा महाधिवेशन भयो भने राम्रो मानिसहरू आउँछन्। त्यो आउने वातावरण बनाउनुपर्‍यो।
जो सक्षम छ, जसले कार्यकर्ताको विश्वास जितेको छ उसलाई आउन दिनपर्छ। युवामात्रै के महिला, दलित, जनजाति सबैबाट आउँछ।
पार्टीभित्रका विवादका पनि कुरा गरौं। सभापति शेरबहादुर देउवा एकलौटी हिसाबले अगाडि बढेको हो?
जुन महाधिवेशनबाट उहाँ सभापति हुनुभयो त्यो विधानले महाधिवेशन सकिएको दुई महिनाभित्र पार्टीका संरचना गठन गरिसक्नुपर्छ भन्छ।
चार वर्षे नियमित कार्यकाल सकेर कामचलाउ भइसकेपछि र महाधिवेशनको मिति तोकेपछि विभाग गठन गर्नु भनेको विधानअनुसार होइन।
दुई महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम किन गर्नु भएन? मिलाउने प्रयास गर्दागर्दा ढिला भएको उहाँहरू भन्नुहुन्छ। मिलाउने प्रयास हो भने अहिले पनि मिलाएर गर्न सक्नुपर्थ्यो।
सुशील कोइराला सभपाति हुँदा विभाग गठनमा केही ढिला हुँदा शेरबहादुरजीले विरोध गर्नुभयो। अहिले हामीले जे भनेको त्यो बेला उहाँले त्यही भन्नुभएको हो। उहाँ पार्टीको सत्तामा पुगेपछि अपोजिसनमा भएका बेला उठाएका कुरा बिर्सन हुन्छ?
विधि र प्रक्रिया पूरा नगरेर गठन गरेको विभागले के काम गर्छ? महाधिवेशन आइसक्यो। पद बाँडेर भोट बढ्छ भन्ने सभापतिलाई लागेको होला। जो मनोनित भएर बसेको छ उसको त कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्छन्।
देउवासँग असन्तुष्ट नेताहरूले अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा हस्ताक्षर बुझाउने तयारी गरेका छन्, यसबारे केही थाहा छ?
थाहा छ। बैठक भइरहेका छन्। कुन-कुन जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरणमा गर्न नहुने काम गरिरहेका छन् त्यो पत्ता लगाउने, समायोजन कुन जिल्लामा भएका छैन र अरू पार्टीबाट आएकालाई अन्धाधुन्द किसिमले क्रियाशील वितरण भइरहेको छ सबै कुरा बैठकमा राख्छौं।
विधिअनुसार ठिक नभएका कुरा त कसैले न कसैले त राख्नुपर्‍यो नि। मेरो कुरा के हो भने फागुनमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। जो पदमा छन् उनीहरूले अनावश्यक किचलो र विधान मिचेर काम नगरे भने समयमै महाधिवेशन गर्न सकिन्छ।
प्रतिपक्षको भूमिकाबारे पनि कुरा गरौं। तपाईं त सांसद पनि हो। प्रतिपक्ष प्रभावकारी भएन भन्ने आलोचना छ?
संसदमा हामी आवाज उठाइरहेका छौं। वाइड बडीका कुरा कसले उठाएको? कांग्रेसले नै हो। गुठी विधेयकलगायतमा कांग्रेसले आवाज उठाएको छ।
तर जनताहरूले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता बोलेको छ कि छैन हेर्दा रहेछन्। अरूले जतिसुकै बोले पनि प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थिति हेर्दो रहेछ। उहाँलाई नदेखेपछि प्रतिपक्ष कमजोर भयो भनेको होला।
लामो समयदेखि संसद स्थगित छ। खोल्न दबाब किन दिनुहुन्न?
यसबारे संसदीय दल र नेताले काम गर्ने हो। हामीले भनिरहेका छौं।
सरकारको छोटो समीक्षा गरौं। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कस्तो काम गरिरहेको छ?
कोरोना महामारी भइरहेको छ। जनताको जीउ ज्यानको सुरक्षामा सबै चिन्तामा छन् तर सरकार कुर्सी र शक्तिकै खेलमा व्यस्त छ।
स्वास्थ्य सामग्रीमा पनि ठूलै घोटला भएको र प्रधानमन्त्रीकै नजिकका मानिसले गरेको भन्ने छ।
प्रधानमन्त्रीले बोल्दा म भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ, सहँदैन भन्नुहुन्छ। तर वाइड बडीका कुरामा उहाँ नै न्यायाधीशजस्तो गरेर त्यो मन्त्रीले गरेको छैन भनिदिनुभयो।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उहाँकै नेताहरू संलग्न रहेको कुरा आयो तर केही गर्न सक्नुभएन। पोलिसी र एकपछि अर्को काण्डमा सरकार फसेको छ।
जनताले दुई तिहाइ मत दिए पनि काम गर्न सकेन। सरकारको ध्यान आफ्नै पार्टीभित्र पक्षपोषण गर्नेमा केन्द्रीत छ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असोज ८, २०७७, ०६:०२:००